Igodo Uzo na Stats I Kwesịrị Knowmara Isi na Oge Ezumike 2014 | Martech Zone
N'afọ gara aga, 1 n'ime ndị na-azụ ahịa 5 mere Ekeresimesi ha niile ịzụ ahịa n'ịntanetị! Yikes… na ọ bụ buru amụma na afọ a, otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ihe niile online shoppers ga-eme ka ha ịzụrụ site na ha ama ma ọ bụ mbadamba. 44% na-azụ ahịa site na mbadamba nkume ma ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na-eji desktọọpụ ha azụ ahịa. You're nọ n'ọnọdụ siri ike n'afọ a ma ọ bụrụ na i mebeghị saịtị gị na ozi ịntanetị maka ndị na-ere ahịa na mbadamba na mbadamba - mana oge anaghị egbu oge iji nwalee ya.
Enwere ubochi isi isii kwesiri inwe mmekorita, mkpanaka, na email na ntinye aka na njikere iji kwalite afọ a. Dị ka onye na-ere ahịa n'ịntanetị, M ga-etinyekwu uche site na ngwụsị izu mgbe Ekele gasịrị ruo Christmas iji lekwasị anya na izi ozi.
Kedu mgbe bụ ekele? (US) - Tọzdee, Nọvemba 27
Kedu mgbe Black Friday? - Fraịdee, Nọvemba 28
Kedu mgbe obere azụmaahịa Satọde? - Satọde, November 29
Kedu mgbe bụ Cyber ​​Mọnde? - Mọnde, Disemba 1
Kedu mgbe Hanukkah? - Tuesday, Disemba 16 ruo 24th
Ini ewe ini Christmas? - Wenezdee, Disemba 24
Kedu mgbe bụ ụbọchị ekeresimesi? - Tọzdee, Disemba 25
Kedu mgbe bụ ụbọchị ịkụ ọkpọ? - Fraịdee, Disemba 26th
Ma n'ezie, ahapụla ụbọchị ikpeazụ nke afọ maka ndị na-azụ ahịa ezumike ezumike! Ha hụrụ ezigbo azụmahịa.
Lelee niile stats chịkọtara na nke a Ezumike Ahịa Infographic site otu na AmeriCommerce.
Tags: nwa ogeụbọchị ịgba egwuKrismasabalị fotere ekeresimesicyber mondayHanukkahezumike mkpanaka ezumikeezumike ezumikeinfographicmobile ahịaobere ụbọchị Satọdeinye ekele